Ụbọchị: 8 August 2019
Ndị otu Bursa Elevator Industrialists Association (BURSAD), BTSO mejuputara site na ihe nchekwa nchekwa igwe dị elu anwalere n’ụzọ kachasị atụkwasị obi ‘Nnyocha Nlekọta Ihe Nlekọta Nchekwa na Mmepe Elevator mere nyocha. Ndị nnọchi anya mpaghara Bursalı nke ụlọ elu, Ministry of Industry and Technology [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç nwere nzukọ dị mkpa na Erciyes. Onye isi ala Büyükkılıç zutere ndị na-etinye ego na Erciyes, ala ekenyela ndị na-etinye ego ngwa ngwa o kwere mee iji mee ka akụrụngwa chọrọ. Onye isi ala Büyükkılıç, Erciyes bụ naanị mba anyị [More ...]
Lezienụ anya na mmanụ ị na-eji maka ọdịnihu dị ọcha!
N’oge na-adịbeghị anya, mmetọ ikuku na gburugburu ebe obibi ruru ọkwa nke na-etinye ahụike ndị mmadụ na ihe ndị ọzọ dị ndụ egwu. Karịsịa n'obodo ukwu ebe ọnụọgụ ụgbọ ala siri ike, amalitela ịhụ ọkwa ikuku na nnukwu nsogbu ahụike. Healthtù Ahụ Ike ,wa, 4,2 [More ...]
Medipol ruo Birgün 'TCDD' Disclaimer
Mahadum Medipol megidere ozi ọma ahụ na TCDD Guest House na TCDD Museum Building nyere ha. Akwụkwọ akụkọ Mahadum Birgün na agọnarị "enyeghị anyị, ekenyela ya", o kwuru. Mahadum Medipol, na mbipụta July nke akwụkwọ akụkọ Birgün 29 “ [More ...]
Dollar Dollar Amadoro, Ọwa Anọ na Anọ Ga-enwe Edinam Istanbul
Minista ụgbọ njem Cahit Turhan Kanal kwupụtara na nsogbu kachasịnụ n'ihe metụtara ọnụ ahịa Istanbul bụ ịrị elu dollar. Ọnụ ego Dollar dara, anya tụgharịkwara ọzọ na Channel Channel dị nro. Ya mere, kedu mgbe a ga-eme ihe nro maka Kanal Istanbul? Turkey gbasochiri [More ...]
Ka nkwadebe nke Eid al-Adha ụmụ amaala na-aga, otu n'ime ihe bụ isi bụ ma àkwà mmiri na okporo ụzọ adịghị akwụ ụgwọ. Ndi akwa mmiri na ụzọ a na-akwụghị ụgwọ n'oge Eid al-Adha? Kedu àkwà mmiri ga-enwere onwe ya? General Directorate nke okporo ụzọ n’oge ezumike al-Adha [More ...]
OPET na enye ndi ahia ya ohere inweta isi mmanu. Ndị ahịa OPET na-agbanwe 3 TL ma karịa n'otu oge 200 otu ugboro na ụbọchị dị iche iche na ọdụ ụgbọ elu OPET ga-enweta 10 TL, 25 TL ma ọ bụ 100 TL maka ụgwọ ọ bụla. [More ...]
Mgbakwunye Renault maka August
N'August, ndị njem niile na ụgbọ ala azụmahịa na-ere ọkụ nke Renault nwere ọnụahịa mbido bara ụba na nhọrọ ịkwụ ụgwọ ka ukwuu. Na mgbakwunye, ika a nwere ohere efu na ụdị azụmahịa dị mfe. Megane na ebugharị ya naClio HB69.250TL na ntinye aka na-amalite site na 1.500TL. [More ...]
Nkwadebe Kocaeli Intercity Bus Terminal maka Bayram
Kocaeli Intercity Bus Terminal na-ahụ njupụta nke Kurba Feast. N'ihi njupụta nke ụmụ amaala na mkpocha, ebe sara mbara na ịdị ọcha gburugburu na mgbakwunye nhicha kwa ụbọchị mere na mgbakwunye nkọwa zuru ezu. 6 puku square [More ...]
Transportgbọ njem ha na ebe a na-eli ozu na Bayram na Kocaeli
k ọrụ ụgbọ njem n'efu na ebe a na-eli ozu na Asri Ili Ozu, Ebe a na-eli ozu Bağçeşme na ebe a na-eli ozu Kent na-aga ezumike okpukpe site na Ngalaba ofgbọ njem na Njikwa okporo ụzọ nke Obodo isi ala. N’abalị ụbọchị ememme ahụ, ụbọchị mbụ nke [More ...]
Ingbọ njem na Bursa ga-edozi Smart Intersections
Ntinye ego nke Bursa Metropolitan Munu nwere ebumnuche ime ka ụgbọ njem obodo bụrụ nke ọhụụ bụ 'Samanlı (11 Eylül Boulevard) Street - Muhsin Yazıcıoğlu (Köklü) Street' na 'Yunus Emre Street - Yıldırım Sports Complex' na Yıldırım District. [More ...]
Akụkọ Taa Taa 8 August 1903 A na-ebibi mmiri dị n'agbata Florina na ụlọ ọrụ Kınalı